Dai 1, 2022 by billy16
Kana iwe uchifanirwa kuwana komputa yako uri kure, mugwaro iri, tinokuratidza matanho ekupedzisa basa iri neiyo Remote Desktop app.
On Windows 10, iyo "Remote Desktop" app inoita kuti zvive nyore kubatana kune mamwe makomputa pane yemuno network neinternet. Icho zvakare chiitiko chinotsiva yakavakirwa-mukati legacy "Remote Desktop Connection" chimiro, icho chiripo.
Iyo app ndeye mushandisi-inoshamwaridzika, asi zvichienderana nechishandiso chaunofanirwa kubatanidza, iyo app ingori imwe yematanho sezvo iwe uchizofanira kugadzirisa mamwe marongero, kusanganisira kutumira chiteshi chakakodzera mu router kuti ubatanidze kune imwe. Windows 10 kombiyuta. Zvakare, pane dambudziko diki. Iwe unogona kuisa iyo Remote Desktop app pane chero edition ye Windows 10. Nekudaro, iyo iri kure desktop protocol (RDP) inobvumira kubatanidza kune mudziyo inongowanikwa muPro edition uye mabhizinesi akasiyana eOS. Windows 10 Kumba hakubvumiri kubatanidza kuri kure.
Muizvi Windows 10 gwara, isu tichakufamba iwe nematanho ekubvumidza kure kubatana kubva mukati metiweki yemuno kana internet uye matanho ekushandisa Remote Desktop app kutanga chikamu chiri kure.
Nzira yekubvumidza sei kubatanidza kure Windows 10
Remote Desktop inoita kuti zvive nyore kubatana kune mamwe makomputa. Nekudaro, iyo gadziriso ichaenderana nekuti iwe unofanirwa kubatanidza pane yemuno network kana kuburikidza neinternet.
Batidza kubatanidza kuri kure Windows 10
Munharaunda yenharaunda network (LAN), iwe unongoda kugonesa iyo sarudzo yekubvumira kure kure desktop yekubatanidza pakombuta yako. Unogona kupedza basa iri kubva kuSettings app kana Control Panel.
Kugonesa Remote Desktop uchishandisa iyo Settings app, shandisa aya matanho:
Tora iyo Bvumira Remote Desktop toggle switch.
Baya simbisa bhatani.
Kana uchinge wapedza nhanho, kure kure desktop yekubatanidza inobvumidzwa pane mudziyo. Windows 10 ichawedzerawo mitemo inodiwa mune yakavakirwa-mukati Microsoft Defender Firewall. Nekudaro, iwe ungangoda kumisikidza iyo mitemo nemaoko kana uine yechitatu-bato firewall.
Kugonesa kubatanidza kure Windows 10, shandisa matanho aya:
Click on System uye kuchengeteka.
Pasi pechikamu che "System", tinya iyo Rega kupinda kure kuita.
Baya kure Tab.
Pasi pechikamu che "Remote Desktop", tarisa iyo Rega kubatana kwekune imwe nyika kune iyi kombiyuta kuita.
tarisa Bvumira zvinongedzo kubva kumakombuta ane Remote Desktop ane Network Level Authentication kuita.
Kana iwe uchida kugadzirisa desktop iri kure uchishandisa internet yekubatanidza, enderera nematanho ari pasi apa. Kana iwe uchifanira kubatana kune imwe mudziyo mukati metiweki yemuno, svetuka kumatanho ari pazasi, uye enderera neiyo tanga kubatana kwedesktop kure mirayiridzo.
Vhura zvibatanidza zviri kure pane router
Kana iyo iri kure yekubatanidza ichifanira kuitika pamusoro peinternet, iwe unofanirwawo kugadzirisa router kuti ubvumire kure kure. Pamusoro pezvo, unozofanirwa kuziva kero yeruzhinji kuti ubate komputa iri kure.
Gadzirisa static IP kero pa Windows 10
Kombiyuta kazhinji inogamuchira ine simba IP kero kubva kuDHCP server (router), zvinoreva kuti inogona kuchinja. Kana iwe ukaronga kushandisa kure kure desktop kwenguva yakareba, ungangoda kugadzirisa static IP kero kuti udzivise kugadzirisa zvakare chiteshi kutumira pane router kana mudziyo uchichinja network kumisikidza.
Kugadzirisa gadziriso yetiweki yekusingaperi, shandisa matanho aya:
Click on Network uye Internet.
Baya Shandura mafungidziri ezvigadziri sarudzo kubva kuruboshwe rwekutenderera pane.
Tinya-kurudyi iyo inoshanda network adapta uye sarudza iyo Properties kuita.
Sarudza iyo Internet Protocol Version 4 (TCP / IPv4) kuita.
Baya Properties bhatani.
Baya General Tab.
Sarudza iyo Shandisa idilesi ye IP inotevera kuita.
Rondedzera IP kero yenzvimbo kunze kweiyo DHCP chiyero kudzivirira kupokana kwekero - semuenzaniso, 10.1.4.201. Kurumidza tambo: Kazhinji, iwe uchawana ruzivo urwu mukati meDHCP zvigadziriso chikamu pane router. Sezvo isiri yega yega router yakagadzirwa yakaenzana, ungangoda kubvunza mugadziri wako wekutsigira webhusaiti kuti uwane rumwe ruzivo kuti uwane ruzivo urwu. Kana usina chokwadi nezvegadziriro yaunofanirwa kushandisa, shandisa yako yazvino TCP/IP gadziriso sereferensi, yaunogona kuongorora ne ipconfig /all raira mu Command Prompt.
Rondedzera subnet mask yetiweki (semuenzaniso, 255.255.255.0), asi sisitimu yacho inowanzozadza ruzivo urwu kubva kwauri zvichibva pa "IP kero."
Rondedzera iyo yakasarudzika kero yegedhi, iyo inofanirwa kunge iri kero ye router - semuenzaniso, 10.1.4.1.
Pasi pechikamu che "Shandisa inotevera DNS server kero", mundima ye "Inodiwa DNS server", tsanangura IP kero yeDNS server yako, iyo kazhinji iri kero yerouter - semuenzaniso, 10.1.4.1.Kurumidza tambo: Kana usingakwanise kubatana neinternet, edza kushandisa imwe yeGoogle Public DNS kero (senge 8.8.8.8) ye "Alternate DNS server" sarudzo.
Mushure mekunge mapedza nhanho, iyo network yekumisikidza ichashanda, uye iyo IP marongero haazombo chinja.
Mamwe ma routers anosanganisira chinhu kuita yazvino TCP/IP kumisikidza static. Kana iwe uchida kushandisa sarudzo iyi, bvunza mugadziri wako wekutsigira webhusaiti kuti uwane matanho ekupedzisa basa iri.
Ziva network yeruzhinji IP kero
Iwe zvakare unozoda iyo kure network yeruzhinji IP kero kuti ubate mudziyo painternet.
Kuti uone iyo IP kero yakapihwa neInternet Service Provider (ISP), shandisa aya matanho:
Vhura web browser.
kushanya Bing.com or Google.com.
Tsvaga "What's my IP."
Simbisa iyo yeruzhinji IP kero mumhedzisiro yekutanga.
Kazhinji, vanopa internet vanopawo ane simba eruzhinji IP kero yevatengi vanogara, zvinoreva kuti yako yeruzhinji IP kero inogona kuchinja nguva nenguva.
Kana iwe uchida mhinduro yakavimbika, ungangoda kutarisa mukati "Dynamic Domain Name System" (DDNS) masevhisi (akadai seDynDNS, OpenDNS, No-IP, kana Asus.com yeAsus routers), inogona kuteedzera IP yeruzhinji. shanduko. Neimwe nzira, iwe unogona zvakare kubata ISP yako kuti ukumbire static IP kero, asi zvinogona kukudhurira iwe nekuti ichi chinowanzo chengeterwa mabhizinesi.
Rongedza kutumira kwechiteshi
Iwe unofanirwa zvakare kutumira iyo TCP poti 3389 pa router kubvumira kubatanidza kure neinternet kune komputa mune network yemuno.
Nhamba yakakurumidza: Iyo router interface ruzivo inogona kusiyana zvichienderana nemugadziri. Nekudaro, iwe unogona kushandisa iyi mirairo sereferensi yekugadzirisa yako router. Iwe unogona kugara uchitarisa webhusaiti yekutsigira mugadziri kuti uwane mamwe mashoko.
Kuendesa chiteshi pane router yako, shandisa matanho aya:
Tsvaga Raira Prompt uye tinya mhedzisiro yepamusoro yekuvhura iyo app.
Nyora murairo unotevera kuti utarise ikozvino TCP/IP configuration uye tinya pinda:ipconfig
Pasi pe "IPv4 Kero" ndima, simbisa kero yemudziyo - semuenzaniso, 10.1.4.201.
Pasi pe "Default Gateway", simbisa kero yegedhi remudziyo (iyo router kero) - semuenzaniso, 10.1.4.1.
Vhura browser yako yaunoda.
Nyora iyo IP kero ye router (default gedhi) mubhari kero uye wodzvanya pinda.
Saina mu router uchishandisa chaiyo username uye password.Kurumidza tambo: Kana usati wamboita izvi, uye uri kushandisa router inopiwa neISP, unogona kuwana ruzivo pane chisiti chakanamirwa kune mudziyo.
Vhura iyo Port forwarding peji peji.
Simbisa kuti Port forwarding service inogoneswa (kana zvichibvira).
Pasi pechinyorwa chekutumira chiteshi, tinya (munyaya iyi) iyo Wedzera nhoroondo bhatani.
Gadzira chiteshi chitsva chemberi neruzivo rwunodiwa - semuenzaniso:
Zita rebasa: (sarudzo) Taura zita rereferenzi resevhisi - semuenzaniso, OfficePC Remote.
Chiteshi Chekunze: 3389.
Chiteshi chemukati: 3389.
Yemukati IP Kero: Taura IP kero yekombuta yauri kuyedza kubatanidza - semuenzaniso, 10.1.4.100
Kana uchinge wapedza matanho, chiteshi chinovhura pane router, ichibvumira kure kure desktop yekubatanidza kuburikidza neinternet kune icho chaicho chishandiso.
Maitiro ekumisikidza kure kure desktop yekubatanidza pa Windows 10
Mushure mekumisa komputa uye router, unogona kutanga kubatanidza kure uchishandisa Remote Desktop app Windows 10.
Isa Remote Desktop app
Iyo Remote Desktop app inofanirwa kunge yave kuwanikwa pairi Windows 10, asi unogona kugara uchiiisa kubva kuMicrosoft Store.
Kuisa iyo Remote Desktop app pa Windows 10, shandisa matanho aya:
Open Microsoft Remote Desktop app peji.
Baya tora (kana gadzabhatani.
Baya Vhura Chitoro cheMicrosoft bhatani.
Kana wapedza matanho, vhura iyo app kubva mukati meMicrosoft Store kana Start menyu.
Tanga kure kure desktop yekubatanidza
Kuti ubatanidze pakombuta uri kure Windows 10, shandisa matanho aya:
Vhura iyo Remote Desktop App.
Baya + Wedzera bhatani kumusoro kurudyi.
Baya PCs kuita.
Pasi pechikamu che "PC zita", tsanangura kero yeTCP/IP yekombuta iri kure:
Kana mudziyo wacho mukati me network yakavanzika, pinda yemuno IP kero.
Kana mudziyo wacho mune network iri kure (kuburikidza neinternet), pinda yeruzhinji IP kero.
Pasi pechikamu che "User account", tinya iyo + (plus) bhatani kumusoro kurudyi.
Simbisa ruzivo rweakaundi kuti upinde mukombuta iri kure:
Kana mudziyo uri kure uchishandisa akaundi yeMicrosoft, isa iyo Microsoft account yekusaina ruzivo.
Kana mudziyo uri kure ukashandisa account yemuno, isa zita rekushandisa uye password kuti usaine.
(Sarudzo) Pasi pechikamu che "Ratidza zita", tsanangura zita remaseti eakaundi.
Baya Save bhatani.
(Sarudzo) Pasi pechikamu che "Ratidza zita", tsanangura zita rekubatanidza - semuenzaniso, Office PC Remote.
Baya Ratidza zvimwe kuita.
(Sarudzo) Sarudza mamwe marongero sezvinodiwa. Kurumidza tambo: Iwo ekuwedzera marongero anosanganisira iyo sarudzo yekubatanidza uchishandisa admin chikamu, isa iyo kure kure yekugadzirisa, uye clipboard, pakati pevamwe. Kazhinji, haufanirwe kugadzirisa idzi sarudzo, uye iwe unofanirwa kuzvishandisa chete zvichienderana nemamiriro ezvinhu.
Pasi pechikamu che "Desktops Akachengetwa", tinya chinongedzo kuti utange chikamu chiri kure.
tarisa Usabvunze nezvechitupa ichi zvakare sarudzo (kana zvichibvira).
Baya batanidza bhatani.
Mushure mekupedza nhanho, iyo yekubatanidza iri kure inofanirwa kumisa pasina matambudziko kana zvese zvakagadziriswa nemazvo.
Kana iwe uchida kumisa chikamu, unogona kuvhara hwindo, kana unogona kudzvanya bhatani rine madoti matatu kubva kumusoro-pakati uye wobva wadzvanya Dzinga bhatani.
Chinja app uye zvigadziriso zvekubatanidza
On Windows 10, iyo Remote Desktop app inokutendera iwe kugadzirisa akasiyana marongero, kusanganisira mamwe magadzirirwo esarudzo, uye gadzirisa zviripo.
Shandura zvigadziriso zvakajairika
Kuti uchinje zvigadziriso zvakajairika muRemote Desktop app, shandisa aya matanho:
Baya Settings bhatani kumusoro kurudyi.
Sarudza iyo account yemushandisi kubva pane iyo rondedzero.
Baya pepeta (peni) bhatani kugadzirisa marongero.
Iwe unogona zvakare kufano wedzera ekuwedzera mushandisi maakaundi (pamwe nekuwedzera + bhatani) iyo yaunogona kushandisa gare gare kubatanidza kune mamwe maturusi kana semumwe mushandisi.
The Gateway Sarudzo inobvumidza iwe kuseta gedhi sevha, asi iwe hauzombodi kushandisa iyi sarudzo. Uyezve, iyo boka sarudzo inoita kuti iwe ugone kuronga zvinongedzo mumapoka akasiyana uye anogoneka.
Chinja marongero esesheni
Kuti uchinje marongero echikamu cheRemote Desktop pa Windows 10, shandisa matanho aya:
Batidza kana kudzima Tanga kubatanidza mune yakazara skrini toggle switch.
Batidza kana kudzima Tanga imwe neimwe yekubatanidza muhwindo idzva toggle switch.
Shandisa Paunenge uchiisa saizi yeapp yekudonhedza-pasi menyu kuti usarudze kuti iyo iri kure desktop sesheni inotaridzika sei iwe paunogadzirisa saizi yeapp. Sarudzo dziripo dzinosanganisira:
Tambanudza zvirimo, kuchengetedza chikamu chiyero (inokurudzirwa).
Tambanudza zviri mukati.
Shandisa iyo "Shandisa keyboard command ine" yekudonha-pasi menyu kusarudza kana mapfupi (senge Ctrl + C uye Ctrl + V) shanda munharaunda chete kana padesktop iri kure. Sarudzo dziripo dzinosanganisira:
PC yangu yemuno chete.
Chikamu changu chiri kure kana chiri mune yakazara skrini (inokurudzirwa).
Chikamu changu chiri kure kana chiri kushandiswa.
(Inesarudzo) Vhura iyo Dzivirira skrini kubva pakupera kwenguva toggle switch.
Padivi pekugadzirisa iyo account uye sesesheni marongero, iwe unogona zvakare kugonesa iyo sarudzo kuratidza tarisiro yedesktop iri kure mukubatanidza, iyo inowedzera mutsara wekuona kuti zvive nyore kuwana kubatana muapp.
Chinja marongero ekubatanidza
Kugadzirisa marongero ekubatanidza kure, shandisa aya matanho:
Dzvanya iyo menyu (matatu-matatu) bhatani mukubatanidza uye sarudza iyo pepeta kuita.
Chinja zita remudziyo, account, uye marongero sezvinodiwa.
Dzvanya iyo menyu (matatu-matatu) bhatani mukubatanidza uye sarudza iyo Bvisa sarudzo yekuidzima.
Dzvanya bhatani remenu (matatu-matatu) mukubatanidza, uye sarudza iyo Pin kuti Kutanga sarudzo yekukurumidza kuwana komputa iri kure kubva paKutanga menyu.
Kana uchinge wapedza nhanho, marongero anozochengeta uye otoshanda mukubatana.
Maitiro ekugadzirisa kure kure desktop yekubatanidza pa Windows 10
Kazhinji, hauwane nyaya uchishandisa Remote Desktop app, asi kana usingakwanise kubatana nemudziyo, unozofanirwa kugadzirisa dambudziko.
Simbisa zvigadziriso zvefirewall
Windows 10 inovhura iyo inodiwa firewall ports otomatiki kana iwe uchigadzirisa Remote Desktop, asi zvinogona kunge zvisiri izvo nguva dzose. Kana kubatana kukatadza, tarisa firewall kuti uone kuti iri kubvumidza Remote Desktop sevhisi.
Kugonesa kubatanidza kure kuburikidza nefirewall Windows 10, shandisa matanho aya:
Vhura iyo Windows chibatiso App.
Click on Firewall & netiweki chengetedzo.
Baya Bvumidza iyo app kuburikidza nemoto kuita.
Baya Shandura zvirongwa bhatani.
tarisa Remote Desktop sarudzo uye tarisa sarudzo dze Private uye ruzhinji rwevanhu.
Kana iwe uine yechitatu-bato firewall kana antivirus, ungangoda kudzima aya ekuchengetedza maapplication kuti uone kana uchikwanisa kubatana. Ungangoda kutarisa webhusaiti yekutsigira software kuti uwane rumwe ruzivo kuti upedze basa iri.
Vhura chiteshi chekubatanidza chiri kure
Kana zvigadziriso zviri izvo, uye iwe uchiri kutadza kubatana, pane mukana wekuti mupi weinternet ari kuvharira kure kure desktop chiteshi nekuda kwezvikonzero zvekuchengetedza. Muchiitiko ichi, ungangoda kubata ISP zvakananga kugadzirisa nyaya.
Shandisa IP kero, kwete zita rePC
Paunenge uchishandisa Remote Desktop app, zviri nani kushandisa kero yeIP pachinzvimbo chezita rekombuta. Zvikasadaro, unogona kugumburwa pane dzimwe nyaya dzekugadzirisa.
Zvakare, paunenge uchiwedzera komputa nyowani, ita shuwa kuisa iyo yakakodzera IP kero. Somuenzaniso, kushandisa yemuno IP kero kubatanidza kure kubva mukati meyakavanzika network uye shandisa iyo chaiyo yeruzhinji IP kero kubatanidza neinternet.
Simbisa kurekodha desktop sevhisi
Iwe unogona zvakare kutadza kubatana nekuti inodiwa kure kure desktop masevhisi haasi kushanda Windows 10.
Kuti uone kana sevhisi yedesktop iri kure iri kushanda pamudziyo wako, shandisa aya matanho:
Tsvaga Services uye tinya mhedzisiro yepamusoro yekuvhura iyo app.
Sarudza iyo Remote Desktop Service uye tarisa kuti "Status" column inoverengwa kumhanya.
Kana isiri kushanda, tinya-kurudyi sevhisi uye sarudza iyo kutanga kuita.
Mushure mekunge mapedza nhanho, iwe unofanirwa kukwanisa kumisikidza chikamu chiri kure Windows 10.
Chinja kuInternet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)
Windows 10 inogona kushandisa ese maviri networking stacks, IP vhezheni 4 (IPv4) uye vhezheni 6 (IPv6) - inozivikanwawo sedual-stack - asi dzimwe nguva, ichasarudza vhezheni 6 yekubatanidza, izvo zvinogona kukonzera matambudziko neiyo kure desktop protocol (RDP). )
Kuisa iyo IPv4 seyekutanga networking stack pa Windows 10, shandisa matanho aya:
Tinya-kurudyi adapta inoshanda uye sarudza iyo Properties kuita.
Bvisa Internet Protocol Version 6 (TCP / IPv6) kuita.
Kana uchinge wapedza matanho, iwe unofanirwa kukwanisa kubatanidza uchishandisa kure kure.
Shandisa account yemuno pachinzvimbo cheMicrosoft account
Kana iwe ukaedza kubatanidza, asi iyo yechokwadi inotadza, uye iwe uri kushandisa Microsoft account, ingangove idambudziko neiyo nzira yekusimbisa. Semuenzaniso, unogona kusangana nematambudziko kana iyo Microsoft account ine maviri-nhanho kusimbiswa kana password isina chengetedzo inogoneswa. Kana zviri izvo, ungangoda kufunga kugadzira uye kushandisa account yemuno kuti uwane kure.
Kuti ugadzire account yemutungamiriri wenzvimbo pa Windows 11, shandisa nhanho idzi:
Pasi pechikamu che "Vamwe vashandisi", tinya iyo Wedzera mumwe munhu pane iyi PC kuita.
Baya Ini handina ruzivo rwekuti munhu uyu apinde-saini kuita.
Baya Wedzera mushandisi pasina Microsoft account kuita.
Simbisa zita rekushandisa.
Gadzira password yakasimba.
Pedzisa mibvunzo yekuchengetedza kuti ubvumire password kuseta kubva paSain-in skrini.
Sarudza iyo ichangogadzirwa account uye tinya iyo Chinja account account bhatani.
Sarudzai mutariri kuita.
Mushure mekunge mapedza matanho, unogona kushandisa ruzivo rweakaundi yemunharaunda panzvimbo yeMicrosoft account kuti ubatanidze kune kure kure desktop desktop.
Isu takatsanangura matanho ekubatanidza kune mudziyo mukati meyakavanzika network uye kuburikidza neinternet, asi kubvumira kure kure desktop yekubatanidza (kunyanya kuburikidza neinternet) inogona kuve njodzi yekuchengetedza.
Rangarira kuti kuve nedesktop yedesktop protocol yakagoneswa uye kuvhura madoko kunogona kubvumidza vanhu vane hutsinye kuwana mukana usingabvumirwe pakombuta. Kana iwe uchida kushandisa chimiro ichi, shandisa password yakasimba, dzima iyo iri kure desktop sevhisi uye bvisa iyo port yekutumira marongero kubva kune router kana isingachadiwi.
Connect iPhone to Windows 10 PC inoshandisa Microsoft Remote Desktop
Android Yakabatana neWi-Fi asi Kwete Indaneti? 11 Kugadzirisa Kuedza